Ifektri yokususa amabala amabala-iChina amabala okususa amabala abavelisi, abaxhasi
ukususwa kweenwele kwe-SHR-950 kunye nomatshini wokuhlaziya ulusu
Umatshini we-SHR-950s yitekhnoloji yoguquko kunyango lokususa iinwele lwe-IPL. Umatshini we-SHR udibanisa i-IPL, ukukhanya kwe-E kunye nemodeli yokusebenza ye-SHR. Ngokwesiqhelo isetyenziselwa ukususwa kweenwele, ukususwa kweenwele ngokusisigxina, ukuvuselelwa kwesikhumba, ukwenza mhlophe kwesikhumba, ukuqinisa ulusu, ukuphucula ukuqaqamba kwesikhumba kunye nokubengezela, ukususwa kombala, ect.
I-SHR-950 ukususwa kweenwele kunye nomatshini wokuhlaziya ulusu
Uxela-950B umatshini esetyenziselwa ukususwa kweenwele, ukususwa kweenwele ngokusisigxina, ukuvuselelwa kwesikhumba, ukwenza isikhumba mhlophe, ukuqinisa ulusu, ukuphucula ukuqaqamba kwesikhumba kunye nokubengezela, ukususwa kombala, ect. Imowudi ye-SHR ngobushushu iyazitshisa iifollic zeenwele. Abaxumi baziva kushushu kuphela kunye nokuva kancinci, abanye bade bathelekise nokuthanjiswa okulula. Inkqubo ikwasebenzisa itekhnoloji ye-In-Motion, apho isiqwenga sesandla sihlala sihamba ngaphezulu kwesikhumba. Inkqubo idibanisa iindlela zokususa iinwele zelaser laser kubandakanya imo yokusebenza ye-SHR yokuhambisa izithonga ezininzi kodwa ngamaxabiso asezantsi amandla, ukufezekisa iziphumo ezingenazintlungu. Inkqubo ilungele zonke iintlobo zolusu, nkqu nezikhumba; Ngokungafaniyo neLaser ye-IP kunye ne-IPL, i-SHR inokuba nayo unyaka wonke ngaphandle kokuzimela elangeni.
I-Pinxel-2s ephathekayo yeMicroneedle RF kunye nomatshini weRF oqhekezayo
Lo matshini usetyenziselwa amabala, isikhumba, imibimbi, ukususwa kombala, ukuLungiswa koLusu, ukuNcitshiswa kwePore enkulu kunye nokuvuselelwa kwesikhumba, ukuphakamisa ubuso, ukuqinisa ulusu. ukuphatha (okungafunekiyo), intloko yokupholisa, kunye nepolar engalunganga.
Lo matshini unemowudi yeBipolar kunye neMono-polar imowudi yonyango ezimbini, Kwimowudi yeMono-polar, amandla e-RF omelele. Ukuba usebenzisa imo-polar mode, isiguli kufuneka sibambe isixhobo esibi se-polar
I-Pinxel-2 Microneedle RF kunye nomatshini weRF oqhekezayo
Ukususwa kwamabala amabala, ukususwa kwemibimbi
Ukuncitshiswa kwePore enkulu, ukuvuselelwa kwesikhumba
Ukuphakamisa ubuso, ukuqinisa ulusu, ukuLungisa ulusu kwakhona
picosecond nd yag laser umatshini wokususa umvambo
Amandla e-Picosecond laser anokufunxwa yi-blue and black melanin. I-melanin iya kwahlulwa incinci kangangokuba inokudityaniswa yinkqubo ye-lymphatic okanye icolwe emzimbeni. Yiyo loo nto itattoo okanye olunye umbala luza kususwa ngaphandle kokonakala kwizihlunu eziqhelekileyo. Unyango lukhuselekile kwaye lulungele ngaphandle kwexesha lokuphumla kunye neziphumo ebezingalindelekanga.
I-picosecond ephathekayo kunye nomatshini wokususa umvambo we-laser
Sebenzisa isiphumo sokuqhushumba kwe-Picosecond Nd: i-laser ye-YAG, i-laser ityhutyha i-epidermis kwi-dermis ebandakanya isixa sobunzima be-pigment. Ukusukela ukuba ukubetha kwe-laser kwi-picosecond kodwa ngamandla amakhulu, ukudubula kwesikhumba kuyadumba ngokukhawuleza kwaye kuqhekeze kube ngamaqhekeza amancinci, aya kuthi asuswe ngenkqubo ye-metabolic system.
I-Picosecond Nd: umatshini wokususa i-yaglaser tattoo
Itekhnoloji yeLaser ibuphucule kakhulu ubuchule bokunyanga izilonda ze-melanocytic kunye nee-tatoos nge-pulsed Q-switch neodymium ekhawulezileyo: yttrium-aluminium garnet (Nd: YAG) laser. Unyango lwe-laser yezilonda zombala kunye nee-tatoos zisekwe kumgaqo okhethiweyo we-photothermolysis. Iinkqubo zeLaser zeQS zinokuphucula okanye zisuse ngempumelelo iintlobo ezahlukeneyo zezilonda ezinobungozi kunye nedermal pigmented lesions kunye neetatto ezinobungozi obuncinci beziphumo ezibi.
Ubuhle be-CO2 Laser, Umatshini weLaser we-Co2, Umatshini wokukhuthaza izihlunu ze-Ems, Shr Opt Ipl Ukususwa kweenwele, Shr IPL Khetha, Ukususwa kwamabala amabala,